Fanoharana miisa telo no nivoitra nandritra ny toriteny izay nifono hafatra mafonja ho an' ireo mpino kristianina. Voalohany, mitaona antsika mba hijery ireo fifandraisana ara-pianakaviana ny Papa Fransoa. Rehefa ny rohim-pianakaviana no lasa fanalahidy enti-mamaha olana ary enti-manapaka amin' izay rehetra marina sy tsara,mora ny manamarina eny fa hatramin' ny hoe manamasina ny fanao sasany izay mirona any amin'ny kolotsain' ny fitadiavana tombotsoa sy ny fanilihana ny hafa. Faharoa, tsy azo afangaro amin'ny tombotsoan'ny tena na amin'ny hery mahasarika avy amin'ny firehan-kevitra mba hanamarinana ny herisetra, ny fanavakavahana ny famonoana olona , ny sesitany,ny fampirohorohoana ary ny fanaovana ny olona eny anjorom-bala. Nanamafy ny Papa Fransoa omaly fa ilaina ny manorina tantara ao anatin'ny firahalahiana sy ny firaisan-kina, ao anatin'ny fanajana maimaim-poana ny tany sy ny fanomezana azo avy aminy ho fanoherana ireo endrika fanjakazakàna. Farany,rehefa ny hazakazaka amin'ny fanangonan-karena no manjary manempotra dia mahatonga ny fitiavan-tena sy ny fampiasàna ny fomba tsy mifanaraka amin'ny moraly hiharatsy kokoa. Teo am-pamaranana dia nanantitrantitra ny Papa Ray Masina fa tsy mavesatra intsony ny fiainana rehefa manomboka manandrana ny hafalian'ny fiainam-baovao. Voaporofo nandritra ireo fitsidihana nataon'ny Papa Fransoa fa mitondra fanantenana tokoa Izy ary hita soritra teny amin’ny endrik’ireo Malagasy avy amin’ny afy valon’ny nosy efa ho 1 tapitrisa nanatrika ny fotoana teny Soamandrakizay izany ny sabotsy sy ny alahady.